အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ IRL Erectile ပြProbleနာများဖြစ်ပေါ်စေသလား။ Andrew Smiler PhD - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က Porn
IRL Erectile ပြဿနာများစေအွန်လိုင်းဗီဒီယို? အင်ဒရူး Smiler ပါရဂူဘွဲ့အားဖြင့်
နိုဝင်ဘာလ 19, 2014 by အင်ဒရူး Smiler
အင်ဒရူး Smiler အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယို - သွေးဆောင် erectile အခက်အခဲများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်မကြာခဏထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
NSFW: ဤဆောင်းပါးအရွယ်ရောက်သူအပြင်အဆင်များနှင့်လူ့လိင်နှင့်ကျန်းမာရေး၏ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေးမှုပါရှိသည်။ *
သူကလိင်ကာလအတွင်းကတက်လာပြီတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းကြောင့်ဂျင်မ်ကုထုံးဘို့ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ။ ငါသူပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ထင်သောအရာကိုမေးတော်မူလျှင်, သူသညျညစ်ညမ်းခဲ့ဟုဆိုသည်။ သူကသူ့နောက်ဆုံးကြားဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ကတည်းကသူသည်အကြောင်းတစ်နှစ်အွန်လိုင်း porn sites များဒီလိုမြင်ကွင်းခဲ့ချင်ပါတယ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ ဂျင်မ်သူမှာရှာဖွေနေခဲ့သည်ထင်ခဲ့ပါဘူး ထိုမျှလောက် porn, ဒါပေမယ့်သူကဖြစ်စေခြင်းငှါအခြားအရာကိုတွက်ဆလို့မရဘူး။ သူဟာလည်းပြဿနာများသူသမ္မာသတိရှိကြလော့အခါခက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ကအရက်သို့မဟုတ်အိုးမဟုတ်ခဲ့သိတယ်။
ဂျင်မ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၎င်းကိုရနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်သူနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးထံမှများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။ သူဟာအရင်တုန်းကနည်းနည်းလေးပင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ယခုသူသည်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့်ခေါ်သည့်“ တိုက်ရိုက်လိင်တံကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း” မိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုတာကသူ့အဖော်ကသူမခဲယဉ်းခင်ကသူ့ကြက်နဲ့ကစားဖို့ဒါမှမဟုတ်နို့စို့ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်မကောင်းသောညဥ့်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူသည်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံတိုင်းအချိန်တိုင်းနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူစိမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါသူ၌ပြproblemsနာများရှိခဲ့သည်။
ဂျင်မ်နဲ့ကျွန်မအောက်ပါအဆင့်သုံးဆင့်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့နေပေမယ့်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကအရမ်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူတို့သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့ရှိခြင်းနေသောယောက်ျားတွေများအတွက်ဘုံကုသတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။
ကျနော်တို့ start ရှေ့မှာငါ့ကိုအရာနှစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပါစို့။ တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေတဲ့ပြဿနာကိုမပေးဖြစ်ပါတယ် သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ယင်းပြဿနာဖြစ်ပါသည် အရမ်းမကြာခဏ porn မှပယ် jerking။ ငါ porn ကောင်းသောသို့မဟုတ်ပြဿနာကိုအခမဲ့ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောင် စကားလက်ဆုံ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကအရမ်းများလွန်းတာကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြာခဏတုန်ခါစေတာကြောင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး ၅ ကြိမ်ပြောတယ်။ ရလဒ်ကတော့သင့် system ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းအားဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာများအတွက်ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ဒီသင်တန်းသည်တူညီတဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး quarterback တစ်ယောက်သည်အချိန်တိုင်းပြီးပြည့်စုံသောလိမ်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ လက်သမားတစ် ဦး ကိုပုံမှန်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မျဉ်းဖြောင့်ကိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်စားဖိုမှူးသည်အသားကိုတောင်မှအသားများထဲသို့လျင်မြန်စွာခုတ်လှဲနိုင်စေသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦး erectile ပြဿနာအထောက်အကူပြုအံ့သောငှါမဆိုကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့ယူဆချက်အောင်တာပါ။ ဒါကသင်တို့အဘို့ကိုမျှော်လင့်ချင်ပါတယ်ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များမယ့် ယောက်ျားတွေ midlife မှာကျော်လွန်, ဒါပေမယ့်သူက 20- နှင့် 30- တစုံတခုအကြားတော်တော်လေးရှားပါးသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအခြေအနေများတွင်သွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးပြproblemsနာများ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲစေသည့်ရောဂါများစွာ၊ COPD နှင့်အဆုတ်ပြproblemsနာများ (သို့သော်အများစုမှာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ) နှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအခြေအနေများမှသင်ခံစားနေရလျှင်သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်လက်အင်္ဂါမရရှိလျှင်ပင်သင့်ဆရာဝန်မှစစ်ဆေးသင့်သည်။
ငါသည်လည်းတစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်၏စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ရန်နှင့်အခြားအသက်ရှင်သောလူတစ် ဦး နှင့်အတူအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သင်၏လက်နှင့်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုယူဆချက်လုပ်နေပါတယ် သင်ကတင်းကျပ်လွန်းသောအစောပိုင်းကာလများမှ စ၍ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သည်ဆိုလျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထူးပြုသည့်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်သင်ပိုမိုလေးနက်သောကုသမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီမှာကျွန်တော်အကြံပြုတာကမင်းကိုတစ်ခါမှမဖူးဖူးတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ကြိုးစားနေလို့ပဲ။
သင်အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေမည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုအတူအမျှဒီကုသမှုကိုသင်လျှောက်ထားဒါမှမဟုတ်သင်အဘို့အထိရောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ အကောငျးဆုံးကုသမှုများအတွက်, သငျသညျလိင်ကုထုံးသို့မဟုတ်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
1 အဆင့်။ စောင့်ကြည့်ရပ်တန့်နှင့်ညစ်ညမ်းမှပယ် jerking ။ ဟုတ်ကဲ့တကယ်။ သငျသညျ - သင့်ခန္ဓာကိုယ် - သင်က၎င်း၏ခဲ့သို့သော်ရှည်လျားသည်လွန်ခဲ့သောအဘို့အနေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်အဘယ်အရာကိုနားမလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ရင်ဆိုင်ရပေးနိုင်ပါတယ်, သင်တစ်ဦး masturbatory အကူအညီအဖြစ်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့, အကြံစည်မှုများအတွက် porn, ပေးတဲ့ dialog, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ပညာကိုစောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ 20, ဘာကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တခြားအရာတစ်ခုခုကိုရှာပါ? 30? 60? သင်၏အချိန်မိနစ်။ ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအရာသည်သင်တို့အပေါင်းသူတို့အားအဝတ်အချည်းစည်းအလောင်းတွေကိုမြင်လျှင်နှင့် Hard-အပေါ်လာပြီအကြားဆက်သွယ်မှုကိုချိုးဖျက်ဖို့စတင်ပါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
မင်းကိုတစ်လလောက်မလန့်စေချင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ တစ်လ။ တကယ်ပဲ တနည်းကား၊ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးသင်၏စနစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်လသင့်လိင်စိတ်နိုးထစနစ်ကိုပေးနေသည်။ သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်သင်ဆက်လုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မလိင်ဆက်ဆံပါနှင့်။
2 အဆင့်။ သငျသညျညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်လကိုသွားပြီနဲ့ off jerking မရှိဘဲ (နှင့်အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရန်သင့် pud ဆွဲမပါဘဲ) ဖွင့်ပြီးနောက်, သငျသညျတဖနျ masturbate မှစတင်နိုင်ပါသည်။ အစည်းအဝေးများအကြားသုံးလေးရက်အတွင်းသွားကြဖို့ကြိုးစား, နေ့တိုင်းလုပ်မထားပါနဲ့။ သင်ရုံတစ်ခုဒဏ်ရာကနေပြန်လာကာအားကစားသမားကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပါဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တဖန် porn စတင်ကြည့်ရှုမထားပါနဲ့။ $ 200 စုဆောင်းကြဘူး, go မလွန်ပါနဲ့။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသုံးပါနှင့်သင့်တကိုယ်လုံးတစ်ဖက်ကိုသင်မထိစေခြင်းငှါ, တူညီသောလမ်းနှင့်အတူကစား။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင့်ရဲ့ဒစ်ထက်ပိုမိုအကြောင်းဖွင့်။ သငျသညျ, ပူပြင်းတဲ့ရေချိုးယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဖယောင်းတိုင်တစည်းကိုလငျးစ, အချို့ Barry White ကကစား, ဒါပေမယ့်ကြောင်းကိုသင်၏အရာရဲ့အလျှင်မူကား, ထိုသို့မသွားကြပါဘူး။ ဒါကအားလုံးအပြီး "ငါ့ကိုအချိန်" ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးလေးမှာ, သင်ဤအချက်မှာညစ်ညမ်းမှချွတ်လူရှုပ်မကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျ porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည့်အခါကအားလုံးကိုသင်က screen ပေါ်မှာကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့အကြောင်းကိုခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်၏လက်ကိုသင်၏ရင်ခွင်အတွက်ကိုပြု၏။ တိုက်ရိုက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ, သငျသညျစခွေငျးငှါ - သို့မဟုတ်မ may - ပွင့်လင်းသင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်နှငျ့သငျဆက်ဆက်ထိမိလိမ့်မယ်။ သင်၏မျက်စိပိတ်ပြီးနှင့်လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအားဖြင့်, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိသဖြင့်, သင်ထိတွေ့သင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစားမျက်မှောက်သင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံစားရရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လေ့လာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ဤနည်းပထမဦးဆုံးမှာစိန်ခေါ်စေခြင်းငှါပယ် jerking ။ သင်သာအခြို့သောရာထူးများတွင်သာအချို့သောသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်၏နှိုးဆွဖြစ်ကြောင်းထိုသို့ပြုနိုင်သောရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ရှိသော - - ဥပမာအားဖြင့်သင်အလွယ်ကူဆုံးကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါ, ခက်ရဖို့လမ်းအတိအကျတူညီအရပျ၌ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သင် porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည့်အခါရှိကြ၏: တစ်စားပွဲခုံမှာထိုင်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာသင့်ကျောဘက်မှာလဲလျောင်း။ ရပါတယ်။ ဤသည်မှာပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်တန်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး, ကအခြေခံပိုင်ခွင့်ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အမှုအရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏နှစ်ပတ်အကြာတွင်ပွင်သွားနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရွေ့လျားမှုပြောင်းပေးပါ။ အော်ဂဇင်မှအဆိုပါတည်ဆောက်ဖွင့်အဆိုကိုကနေလာပါတယ်။ porn မှပယ် Jerking သင်၏လက်၏ရွေ့လျားမှုနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်သင့်ရဲ့တင်ပါး၏ရွေ့လျားမှုနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ကြက်န်းကျင်ကိုပြန်နှင့်ထွက်သင်၏လက်ကိုရွေ့လျား၏, သင်တို့လက်သို့သင့်ရဲ့လိင်တံတွန်းရန်သင့်တင်ပါးကို အသုံးပြု. စတင်ပါ။
နှစ်ပတ်ကြာအောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအောင်မြင်စွာကြိုးစားပြီးနောက်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုသည်လမ်းဖြတ်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခဲယဉ်းပါ၊ သင်၏ကြက်ကိုသင်၏လက်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းရေတွက်။ ၁၀ အထိရေတွက်ပြီးနောက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကခက်ခက်ခဲခဲနေမည်ဆိုလျှင်နောက်တစ်ကြိမ် ၁၅ သို့ (သို့) ၂၀ အထိရေတွက်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးရှုံးသွားပါကနောက်တစ်ကြိမ်တွင် ၅ ကြိမ်ရေတွက်နိုင်သည်။ ဒါကအရေးကြီးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့အတူနေတဲ့အခါ၊ ကွန်ဒုံးပေါ်တွင်တင် သို့မဟုတ်ရာထူးပြောင်းလဲသွား။
23ရက်သတ္တပတ်အဖြစ်နည်းနည်းနှင့်6ရက်သတ္တပတ်သကဲ့သို့ကြာသွားနိုင်သည် Step ။ သငျသညျခြေလှမ်း3အနည်းဆုံး2ရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းရမည်, ဒီသင်တန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကြာသည်။ သငျသညျ6ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အောင်မြင်မှုရှိခြင်းမဟုတ်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အမှုအရာ6ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်နေတယ်ဆိုရင်, လာမယ့်ခြေလှမ်းမှအပေါ်ကိုရွှေ့။
3 အဆင့်။ သင်တစ်ဦးတစ်လတစ်ပတ်ကိုနှစ်ဦးကိုမှသုံးကြိမ်ချွတ် jerking ပါတယ်, သင်နေဆဲ porn ကိုကြည့်မရင့်ပြီးနောက်အချို့အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းဖို့အချိန်ပါပဲ။ အမျိုးမျိုးပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အသက်တာ၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပြီး, သူကဆက်ဆက်တစ်ဦးထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိင်အသက်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါကူညီပေးသည်။ ဒါဟာထကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်ပါပဲ။
သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာအနေအထားတွင် masturbating ခဲ့တာမှန်လျှင်, အခြားအရာတစ်ခုခုစမ်းပါ။ ဘာပဲ, ရှိသမျှလေးပေါ်ရ, (နောက်ကျောသို့မဟုတ်ဝမ်း) အိပ်မတ်တပ်ရပ်, ထိုင်။ မာရရပ်တန့် ကွန်ဒုံးမရ နှင့် ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်တင်ထို့နောက်ရုံသငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌လိုလိုပဲဆက်လက်။
သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ - သို့မဟုတ်အစား, အလေ့အကျင့် - ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့လိင်နှင့်မျက်နှာပြင်၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်နဲ့တူလျော့နည်းကဲ့သို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဤတွင်တစ်လသုံး, သင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက် - သို့မဟုတ်အစား, အလေ့အကျင့် - ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့လိင်နှင့်လျော့နည်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်နှင့်သင့်မြွေ petting နဲ့တူကဲ့သို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒါကယောက်ျားတွေပဲ အကယ်၍ ဤအရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်အမှန်တကယ်ပရိုဂရမ်ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုမှာသင့်တွင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိပြီးဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဖို့လိုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာသင်သည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောပြworkနာအချို့မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရန်လိုအပ်သည်။ တတိယဖြစ်နိုင်ခြေကတော့သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့သည်စုံတွဲကုထုံးဆရာနှင့်တွေ့ရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။
Andrew Smiler အကြောင်း - အင်ဒရူး Smiler, Ph.D Winston-လမ်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား (USA) တွင်နေထိုင်နေတဲ့ကုထုံး, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, စာရေးဆရာနှင့်စပီကာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ရေးသားသူက "မြာပွေစိန်ခေါ်: ကရာငယ်ရွယ်အထီးလိင်များ၏အသွင်မြင်လာအောင်အပြင်"နှင့်ပူးတွဲရေးသားသူခရစ် Kilmartin အတူ၏"အဆိုပါပုလ်ကိုယ်ပိုင် (5th တည်းဖြတ်ခြင်း)"။ သူကတစ်ဦးလွန်ခဲ့သောသမ္မတဖြစ်ပါသည် စိတ်ဓာတ်အမျိုးသားများ၏လေ့လာမှုနှင့်ပုလ်များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာဆုံးမသွန်သင်ထားသည် သစ်တောတက္ကသိုလ်နိုး နှင့် SUNY Oswego။ ဒေါက်တာ Smiler ၏သုတေသနသည်ပုလ်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအဓိကထားသည်။ သူသည်လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံမှန်ရှုထောင့်များဖြစ်သောအသက်နှင့်လက်ခံခြင်း၊ ပထမဆုံးနမ်းခြင်းကိုရခြင်း၊ ပထမ“ လေးနက်သော” ဆက်ဆံရေးနှင့်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့ကိုလေ့လာသည်။ ထိုသူနောက်သို့ လိုက်၍၊ @AndrewSmiler။ - ပိုမိုကြည့်ရှုပါ - http://goodmenproject.com/featured-content/andrew-smiler-online-videos-causing-irl-erectile-problems-these-three-steps-can-help/#respond